Xiaomi Mi Watch: Famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Nisy tondra-drano nandritra ny roa herinandro, miaraka amin'ny marika manambara ny endriny. Farany, ny Xiaomi Mi Watch dia natolotra ofisialy izao. Ny marika sinoa dia mamela antsika amin'ny smartwatch voalohany, izay mampiasa Wear OS ho toy ny rafitra fiasa. Ity dia iray amin'ireo manintona lehibe an'ity famantaranandro ity, izay afaka manome lanja ity rafitra miasa ity.
Ny famolavolana an'ity Xiaomi Mi Watch ity dia zavatra iray izay niteraka fanehoan-kevitra fa tsy ho tsara kokoa hatrany, noho ny fitoviana akaiky amin'ny famantaranandro amin'ny Apple Watch. Tena mitovy ny famolavolana, mazava ho azy, saingy ity famantaranandro ity dia mamela antsika hanana lafin-javatra maro izay mahaliana ny mpampiasa. Dingana iray ihany koa ho an'ny sonia.
Satria Xiaomi dia iray amin'ireo marika amidy indrindra amin'ny sehatry ny akanjo misaotra ireo fehin-tànana isan-karazany. Ny orinasa dia mamela antsika smartwatch ankehitriny, zavatra izay tsy isalasalana fa hanitatra ny fisiany amin'ity sehatry ny tsena ity. Amin'ny sehatra ara-teknika dia hitantsika fa famantaranandro ity izay mahavita tsara, miaraka amin'ny sandam-bola tsara.
1 Famaritana Xiaomi Mi Watch
Famaritana Xiaomi Mi Watch
Fantatra ny endrika, satria ity Xiaomi Mi Watch dia mampatsiahy tokoa ny Apple Watch. Amin'ny ambaratonga teknika ihany koa dia hitantsika fa misy singa maro izay efa hitantsika tamin'ny famantaranandro marani-tsaina hafa miaraka amin'ny Wear OS. Ka tsy misy ny tsy ampoizina amin'ny lafiny sasany, na dia tsy ampoizina aza ny marika amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny Wear OS amin'ny famatrehany, izay mety ilay lafiny mahasarika ny saina indrindra amin'ity tranga manokana ity. Ireto misy famaritana feno amin'ny famantaranandro:
Pikantsary: ​​1,78 santimetatra AMOLED
Fahatsiarovana RAM: 1 GB
Refy: 44.69 x 36.92 x 12 mm
Lanja: 44 grama (tsy misy fehy)
Fifandraisana: Bluetooth 4.2, NFC, LTE miaraka amin'ny eSIM
Sensors: GPS, Glonass, Beidu, accelerometer, gyroscope, barometre ary sensor ny tahan'ny fo
Batterie: 570 mAh.
Rafitra miasa: Manaova OS miaraka amin'ny MIUI ho an'ny Watch ho toy ny sosona fanaingoana
Ny hafa: bokotra satroboninahitra rotary, fivarotana app anao manokana
Ity famantaranandro ity dia mamela antsika hanana fizakan-tena maharitra roa andro, izay tsy ratsy, na dia ampitahaintsika amin'ny maodely aza izany toa ny Huawei Watch GT 2 izay manome hatramin'ny tapa-bolana, dia latsaka fohy. Ny famantaranandro dia mampiasa ny processeur Snapdragon Wear 3100, izay efa mahazatra ao amin'ity sehatry ny tsena ity. Ho an'ny maro, angamba fahadisoam-panantenana amin'ity lafiny ity, indrindra ankehitriny fa miaraka amin'ny processeur vaovao ho an'ny famantaranandro marani-tsaina miaraka amin'ny Wear OS i Qualcomm.
Ny tsy ampoizina lehibe ao amin'ny Xiaomi Mi Watch dia ny MIUI ampiasaina koa, amin'ny kinova natao hampiasaina amin'ny famantaranandro. MIUI ho an'ny fiambenana dia kinova namboarina tamin'ny famantaranandron'ity sosona ity. Ny sary masina, ny fiasa na ny sarimiaina dia mitovy amin'ny an'ny MIUI 11, ka ho an'ny mpampiasa maro dia mahazo aina izy raha ampiasaina. Raha ny momba ny fiasa dia mamela antsika hiasa izay efa hitantsika matetika amin'ny famantaranandro marani-tsaina, satria manana fomba fanatanjahantena maromaro (mandeha, mihazakazaka, mandeha an-tongotra ...) ahafahantsika manara-maso ny hetsika. Manana ny sensor ilaina izy ireo, toy ny sensor amin'ny tahan'ny fo, sns. Ka afaka manana ny refy handrefesana ny asantsika amin'ny fotoana rehetra isika.
Toy ny mahazatra amin'ny vokatra marika, ny fandefasana azy any Shina ihany no voamarina amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana angon-drakitra momba ny fandefasana an'ity Xiaomi Mi Watch any Espana ity izahay. Azo antoka ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia ho ofisialy ihany koa izy io ao amin'ny firenentsika, saingy ny orinasa dia tsy nanome antsipirihany na daty nanombohana azy. Any Sina dia efa namidy tamin'ny fomba ofisialy.
Ity famantaranandro ity dia tonga amin'ny kinova roa, miaraka amin'ny fonosana aliminioma na tranga seramika. Ka ny mpampiasa dia afaka misafidy ny kinova izay heverin'izy ireo fa tsara indrindra. Ny voalohany amin'izy ireo dia manana vidiny 166 euro hanovana, raha 206 euro ny vidin'ny kinova misy ceramika. Mety ho avo kokoa ny vidin'izy ireo rehefa hanomboka any Espana ato ho ato izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi Watch: ny smartwatch voalohany an'i Xiaomi dia ofisialy
Juan Berrio dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsy nahavita namokatra ity famataranandro ity. Mety hahaliana antsika maro ny mety ho izy, satria misy sy ho maodely sy dikanteny maro foana, saingy tsy dia mahaliana loatra raha hararaotina ara-teknika.
Valiny tamin'i Juan Berrio
Ny mpikaroka dia manenjika ny Google Assistant, Siri, ary Alexa amin'ny alàlan'ny Projecting Laser Light Command ao amin'izy ireo
Ny Roborock S5 Max dia tonga tsy ho ela any Eropa amin'ny vidiny tsara indrindra